သင်ဟာ အတွေးလွန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ အလေ့အထ (၁၀)ခု - Lifestyle Myanmar
လူအများစုက လေးလေးနက်နက်အာရုံစိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ကို “တွေးခေါ်သူ”လို့ ယူဆကြပါတယ်။ သူက ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကို စဉ်းစားနေတာလား(သို့) ဘဝကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို သူစဉ်းစားနေတာလားလို့ ကျွန်မတို့ တွေးမိပါတယ်။ သူဟာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာဖြင့် အတွေးလွန်နေသူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းနှင့် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းက ကျွန်မတို့အား လူနှင့် တိရိစ္ဆာန်လောက ခွဲခြားထားတဲ့ စွမ်းရည်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဘဝအတွက် ကျွန်မတို့မှာ အတွေးဖြစ်စဉ်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်သူနဲ့ အတွေးလွန်သူ မတူပါဘူး။ နေရာတကာမှာ အတွေးလွန်တတ်သူ တစ်ယောက်ဟာ အခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲ အခက်အခဲလေးတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- တစ်နေရာရာသွားဖို့ အိမ်ကထွက်လာပြီးမှ မီးဖိုပိတ်ခဲ့မိလား? တံခါးသော့ခတ်ခဲ့မိလားလို့ ရုတ်တရက် တွေးမိပြီး ပြန်စစ်ဆေးဖို့ အိမ်ကိုပြန်လာဖူးပါသလား? ဒီလိုလုပ်တာ သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။
‘ငါပဲ အရမ်းအတွေးလွန်နေတာလား’လို့ တစ်ယောက်ယောက်ကို သင်ပြောပြဖူးပါသလား? အရေးပါသော ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုစွမ်းရည်က သင့်ရဲ့ အသိပညာကို တိုးတတ်စေပြီး အသစ်သောအရာတွေကို သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ အတွေးလွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရင် အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုက သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကို လျော့နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်၊
သင့်ကိုယ်သင် တာရှည် သံသယဝင်လာပြီး သင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကို ဒုတိယ-ခန့်မှန်းတွက်ချက်တဲ့အခါ ၎င်းက အပျော်ရွှင်ဆုံး အတွေ့အကြုံတွေကိုတောင် ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ သင့်ရဲ့နောက်ကြောင်းပြန်တွေးဆခြင်းက မိတ်ဆွေတွေ၊ ချစ်ရသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပြိုကွဲစေနိုင်သော စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနှင့် အဆိုးမြင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်အတွေးလွန်လေလေ ပျော်ရွင်မှုနှင့် စိတ်ချမ်းမြေ့မှု နည်းလေလေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပျက်သဘောအတွေးပုံစံတွေကို ပိုမိုလေးနက်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေသို့ ဖွံ့ဖြိုးခွင့်မပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်မှာ ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကို သင်သိပြီဆိုရင် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဆီကို ဦးစွာ ခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့် (၁၀)ခုရှိရင် သင်ဟာ အတွေးလွန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ သင်ဟာ ပြီးပြည့်စုံသောသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်
လူအများစုက သူတို့လုပ်သမျှကို အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေကြစဉ်မှာ ပြီးပြည်စုံတဲ့သူတွေက ပိုပိုပြီး ပြည့်စုံချင်ကြပါတယ်။ သူတို့က တခြားသူတွေနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အပေါ်မှာ လက်တွေ့မဆန်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေဟာ အရာရာကို ပြည့်စုံပြီးရင်း ပြည့်စုံအောင် လုပ်ချင်ကြတာကြောင့် အခက်အခဲတွေ ရှိလာကြပါတယ်။ သင်ဟာ ဒီလိုဇီဇာကြောင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ရင် ရလဒ်တွေကို ဘယ်သောအခါမျှ စိတ်ကျေနပ်မှု ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် မညီသော တောင်းဆိုမှုတွေက အလုပ်ခွင်မှာဖြစ်စေ၊ အိမ်မှာဖြစ်စေ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
၂။ ဦးစားပေး ခက်ခဲမှုရှိပါတယ်
ကျွန်မတို့ဟာ အရာအားလုံးကို ဦးစားပေးလုပ်မယ်ဆိုရင် အရေးကြီးတဲ့အရာ ဘာမှရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ အသေးအဖွဲကိစ္စတွေပါ်မှာ အမြဲတမ်းမုန်တိုင်းထန်နေသူ တစ်ယောက်နားမှာ နေခဲ့ရဖူးသလား? ဒီဒရမ်မာဇာတ်ကောင်တွေက အများအားဖြင့် အသေးအဖွဲကိစ္စရပ်တွေမှာ လုံးထွေးနေတတ်ပါတယ်။ သင်အတွေးလွန်တဲ့အခါ အလုပ်တွေနဲ့ ပြဿနာတွေကိုဦးစားပေးဖို့ သင့်စွမ်းရည်ကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေက အရမ်းလွှမ်းမိုးနေသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အရေးမပါတဲ့ အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာ အသုံးပြုတာဖြစ်လို့ သင့်စွမ်းအင်တွေကို ညှစ်ထားသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
၃။ သင်ဟာ တစ်ပါးသူအပေါ် ယုံမှားသံသယလွန်ကဲတယ်လို့ မကြာခဏ ခံစားရပါတယ်
သင့်နားတွေ ယားနေပြီဆိုရင် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အကြောင်းပြောနေတယ်လို့ ထင်ခဲ့ဖူးပါသလား? သင့်ကို နောက်ကွယ်က လူတွေ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ သင်ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတစ်ပါးကို ယုံမှားသံယလွန်တာက သင့်အဖြစ်မှန်ကို မမှန်မကန်ဖော်ပြနိုင်ပြီး သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူတွေအား မယုံသင်္ကာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ သင်ဟာ အာဃာတကို ကိုင်စွဲထားပါတယ်
ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် မေ့လျော့ခြင်းဟာ သီလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အပြစ်တွေကို မေ့လို့မရနိုင်ပေမယ့် ကျူးလွန်သူကို ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင်ဟာ အတိတ်ကာလကို စမြုံ့ပြန်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သလို သက်သေအဖြစ် အာဃာတကို ကိုင်စွဲထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အတွေးလွန်တတ်သူတစ်ယောက်အတွက် အတိတ်မှ နာကျင်မှုဖြစ်ရပ်တွေဟာ သူတို့ဦးနှောက်ထဲမှာ ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ သင်ဟာ အာဃာတကို မှီဝဲနေတဲ့အခါ သတိရတိုင်း အနာဟောင်းကို တူးဆွနေမိနိုင်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို အာရုံစိုက်နိုင်မှသာ နာကျင်မှုကို ကျော်လွှားပြီး ကုသခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါတယ်။
၅။ သင်လုပ်နိုင်တာထက် တွေးတဲ့အချိန်ကို ပိုသုံးပါတယ်
ခွေးတစ်ကောင်က သူ့အမြီးကို လိုက်ကြည့်နေတာ မြင်ဖူးလား? သူဟာ မြန်မြန်ပြေးဖို့ ကြိုးစားကောင်း ကြိုးစားမှာဖြစ်သော်လည်း သူဟာ အဲ့နေရာမှာတင် ပတ်ချာလည်နေပြီး သူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုက အချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ ဘာမှမဖြစ်မြောက်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ အလုပ်များနေသာ လူတွေရဲ့ အားထုတ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ tail-spinner တစ်ယောက်ဖြစ်ပါက သင့်ခံစားချက်တွေရဲ့ ပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့် ဦးစားပေးဆုံးရှုံးခြင်းက မီးထဲကို လောင်စာထည့်နေတာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပညာရှိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချသင့်ပါတယ်။ အမှားတွေ ပြုလုပ်မိရင် သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ယုံကြည်ကိုးစားတတ်ရန် သင်ယူရပါမယ်။
အတွေးလွန်သူတွေဟာ သူတို့အတ္တတွေကို လွဲမှားသော အတွေးဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ လုံးထွေးထားလေ့ရှိပါတယ်။ အတ္တသမားဟာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ပေါ်လွန်သော်လည်း self-esteem ညံ့ဖျင်းတာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကောင်းတဲ့အလုပ် လုပ်တာကို ဂုဏ်ယူခြင်းက ဘာမှမမှားပါဘူး။ အခြားသူတွေရဲ့ ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံယူဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော် သင့်အောင်မြင်မှုတွေဟာ သင်ယခင်က လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသာ ပျော်မွေ့ခြင်းထက် ပိုလုပ်ဆောင်ဖို့ လှုံ့ဆော်သင့်ပါတယ်။ အတွေးလွန်ခြင်းအောင်မြင်မှုက အနာဂတ်မှာ အာမခံမရနိုင်ပါဘူး။
၇။ အခြားသူတွေပြောတာကို အမြဲတမ်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်ပါတယ်
ကျွမ်းကျင်သော နားထောင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခြားသူက သင့်အား ဘာပြောနေတယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ သင့်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကို ပိုကောင်းလာစေပြီး နားလည်မှုလွဲမယ့် အခွင့်အလမ်းနည်းပါတယ်။ သို့သော် စကားလုံးတစ်ခုစီကို အကြောက်လွန်ရောဂါနှင့် ဆန်းစစ်တဲ့အခါ သင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့် အခြားသူတွေအတွက် အကျိုးယုတ်စေတဲ့ အပြုအမှုလုပ်မိပါလိမ့်မယ်။
ဝါကျတိုင်းကို အမြဲရှာဖွေနေပြီး လျှို့ဝှက်အဓိပ္ပာယ်ကို ရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အကျိုးရှိရှိစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှု ပျောက်ဆုံးနေနိုင်ပါတယ်။ အလွန်အမင်းဝေဖန်မှု၊ မယုံသင်္ကာဖြစ်မှု ဖြစ်လာရင် သူတို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာ သင့်ကိုလှောင်ပြောင်နေတယ်၊ မကောင်းတဲ့ စကားပါတယ်လို့ ထင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီအကျိုးဆက်ကတော့ အခြားသူတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု ရပ်တန့်သွားပြီး အထီးကျန်လာပါလိမ့်မယ်။
၈။ သင်ဟာ အဆိုးမြင်ဝါဒီတစ်ယောက်ပါ
ရသီဥတုအခြေအနေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နေ့တိုင်း နေမသာနိုင်ကြောင်း သင်နားလည်ပါတယ်။ ထို့နည်းတူ သင့်ဘဝအခြေအနေအားလုံးဟာ အပြုသဘောဆောင်လိမ့်မယ်လို့ တွေးခြင်းက လက်တွေ့မကျပါ။ ကမ္ဘာမြေကြီးက ရှင်သန်ဖို့ မိုးရေနှင့် နေရောင်ခြည်နှစ်မျိုးစလုံးကို ယူပါတယ်။ ဘဝအတွက်လည်း အလားတူပါပဲ။
သို့သော် ဒီနိယာမက အရာအားလုံးအပေါ် အပျက်သဘောဖြစ်ဖို့ လိုင်စင်မပေးပါဘူး။ အတိတ်ကနာကျင်မှုနှင့် စိတ်ပျက်စရာတွေကနေ သင်ယူပြီး ကြီးပြင်းမယ့်အစား အချို့သောသူတွေက ခါးသီးလာကြပါတယ်၊ သင်ကော အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ အဆိုးဆုံးတွေကို ယူဆပြီး အဆိုးမြင်သူဖြစ်နေပြီလား?
၉။ သင်ဟာ တုံ့ပြန်မှုတွေနှင့်အတူ စိတ်စောနေတတ်ပါတယ်
ကျွန်မတို့ဟာ ချက်ချင်းကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုတွေ လိုအပ်သော ကမ္ဘာမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း (သို့) မိသားစုကို ဖုန်းဆက်တဲ့အခါ ဒုတိယဖုန်းမြည်သံမှာ ကိုင်ဖို့ (သို့) သင့်ရဲ့အသံမက်ဆေ့ချ်ကို ရပြီးပြီးချင်း ပြန်ခေါ်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပါလိမ့်မယ်။ အီးမေးလ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ send ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးတာနဲ့ သင်ဟာ စာလက်ခံသူဘက်က ချက်ချင်းဖတ်ပြီး တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု ပို့ပေးစေချင်ကြပါတယ်။ ထိုသို့သော စိတ်မရှည်ခြင်းက အတွေးလွန်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁၀။ ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်တတ်ပါဘူး
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများအပြင် လူများစွာဟာ သူတို့ဦးနှောက်က သူတို့ကို ခွင့်မပြုတာကြောင့် အိပ်လို့မရနိုင်ကြောင်း ညည်းညူတတ်ကြပါတယ်။ သင့်ခေါင်းထဲမှာ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ စကားတွေအမြဲတမ်းပြောနေပြီး ညဘက်မှာ ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေသလား? သင်ဟာ ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို နောင်တနှင့်အတူ ပြန်စမြုံ့ပြန်နေတာ (သို့) မနက်ဖြန်ကို စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ အဆိုးမြင်ခြင်းနှင့်အတူ ဖျော်ဖြေနတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။